बर्दिबास प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेका युवकको ग्रान्डी अस्पतालमा मृत्यु - TodayKhabar
महोत्तरी, १० मंसिर । बर्दिबासमा मंगलबार ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै गरिएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका युवकको मृत्यु भएको छ । बर्दिबास–१ बुद्धिराज न्यौपानेको उपचारकै मंगलबार राति मृत्यु भएको हो ।
हत्या गरी बोरामा कोचेर फालिएको अवस्थामा स्थानीय गुलबसा खातुनको शव मंगलबार बिहान बर्दिबास–१४ स्थित उनको घरनजिकै फेला परेको थियो । बालिका दुई दिनदेखि बेपत्ता थिइन् । उनको बलात्कारपछि हत्या भएको भन्दै आफन्त तथा स्थानीय बासिन्दा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित शव सडकमा राखेर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
भिड नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको थियो । उनको न्यायको माग गर्दै स्थानिय र परिवारले मंगलबार बिहानैदेखि बालिकाको शव सडकमा राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका न्यौपाने र बर्दिबास–५ का श्याम कार्कीलाई उपचारका लागि मंगलबार दिउँसो ३ बजे हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको थियो ।
काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचारकै उनको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । बालिकाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।
उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेको चट्टानी अडानः गलिनन तुम्बाहाङफे
संक्रमण देखिएका चारै जनाको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
प्रधानमन्त्री ओलीलाई छल्दैं प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति देउवाबीच के पाक्दै छ ?
पाैडेल समूहका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूकाे भेला सानेपामा हुँदै